Uchwepheshe we-Semalt Ekuvimbeleni ama-Injini Yokusesha Ukusuka Ekulinganiseni Ibhulogi le-WordPress
Inhloso yokuqala ibhulogi kubantu abaningi iwukuba nomgwaqo omkhulu ngangokunokwenzeka. Kwabanye, kungase kubonakale sengathi iphupho ligcwaliseka uma i-Google ibhala okuqukethwe kwayo. Ngakho-ke, siyasibuza lo mbuzo: kungani umuntu efisa ukungabi naso indawo yawo ekhokhelwe yinoma iyiphi injini yokusesha ?
URoss Barber, onguchwepheshe ophezulu Semalt , uchaza lapha ezinye zezizathu zokuvimba izinjini ukusesha iwebhusayithi yakho nezindlela zokwenza lokho.
Uma uqala, futhi ibhulogi isencane, kukhona ithuba eliphakeme lokuthi usebenza kusayithi futhi ushicilela okuqukethwe okuvela khona. Ukuqhubekela phambili, ungabona ukuthi okuqukethwe obekayo akuphelelanga futhi ngeke ufise abanye abantu njengoba kungathinta kabi ukwethembeka kwakho. Isixazululo kuphela ongacabanga ngaso ukususa isayithi ukuba ungabonakali emiphumeleni yokusesha ye-Google uze uhloniphe amakhono akho wokubhuloga, futhi manje usulungele abantu ukuthi bathole isayithi lakho - ubiquiti powerbeam vs nanobeam 5ac. Okulandelayo yizindlela ezimbalwa zokwenza lokhu:
Isinyathelo 1. Khubaza Izinjini Zokusesha kusuka ku-Indexing WordPress
Umbono ngemuva kwalokhu ukuvimbela izinjini zokusesha ekukhaleni isayithi kuqala. Kunezindlela ezimbili ongayisebenzisa:
Indlela 1: Kunesici esakhiwe ngaphakathi ku-WordPress esivimbela izinjini zokusesha ekukhaleni isayithi.
Vula isigaba se-Admin ku-WordPress bese ukhetha "Ukufunda" kusuka endaweni yezilungiselelo. Ku "ukubonakala kwe-injini yokusesha," kunebhokisi lokuhlola elenza umsebenzisi "Agxeke izinjini zokusesha ekukhokheni isayithi." Uma usuhlola leli bhokisi, chofoza ugcine bese uphuma.
Indlela 2: Uma ukhetha indlela eyengeziwe, ukuhlela i-robots.txt kuyindlela engcono kuwe..
Thola ama-robots.txt emafayilini wewebhusayithi ongafinyelela ngayo ngokusebenzisa umphathi wefayela. Sebenzisa i-syntax (i-User-agent: *, Cindezela u-Enter, futhi Ungavumeli: /), ukugcina izinjini zokusesha zingenela isayithi.
Isinyathelo 2. Ukuvikelwa Kwephasiwedi
Izinjini zokusesha kanye nabahlayileli abakwazi ukufinyelela amafayela avikelwe ngephasiwedi kusayithi. Sebenzisa izindlela ezilandelayo ukudala amaphasiwedi:
Indlela 1: Izinsizakalo zokubamba i-hosting zinezici eziphathekayo ezivikelwe iphasiwedi okulula ukuyisebenzisa. I-Hostinger neCanel banezinqubo ezifanayo ezifanayo.
Uma usuphethe iphaneli yokulawula ibamba, thola isithonjana ngenketho yokuvikela isiqondisi. Ngokuchofoza izinkinobho, iwindi elisha livela ngohlu lwamafayela, okukhetha ngalo "umphakathi_html." Chofoza inkinobho "yokuvikela" bese uphuma.
Indlela 2: Ungasebenzisa i-plugin ye-WordPress njenge-WordFence, noma i-Password Protect ukuze uzuze imiphumela efanayo. Qiniseka ukuthi kusesikhathini ngaphambi kokuyifaka. Ngemva kokufaka, dala iphasiwedi yesayithi, futhi konke kuzohlala kuphephile kusuka ekukhaleni.
Isinyathelo 3. Ukususa ikhasi elixhunyiwe kusuka ku-Google
Kunezikhathi lapho i-Google ibeka khona isayithi ngokumelene nezifiso zomnikazi. Kukhona indlela yokuguqula lokhu, kodwa kudinga ukusetha i-Google Search Console yendawo yokuqala ene-indexed. Ngemuva kokunquma kwiwebhusayithi oyifisa ukususa, pheqa phezulu ku- "Susa ama-URL" ngaphansi kwethebhu "ye-Google Index". Ebhokisini elingenalutho elinikeziwe, faka i-URL yesayithi bese uchofoza uqhubeke. Khetha ukufihla okwesikhashana leli khasi ukukhahla bese uhambisa isicelo.
Akukhathaleki ukuthi yiziphi izizathu okufanele uzivimbele izinjini zokusesha ekukhaleni nokukhomba imininingwane kusayithi lakho. Izinyathelo ezinikeziwe zizokusiza ukuthi ufinyelele kahle lokho. Abanye banganikezi imiphumela emihle kodwa bakhonze injongo ehlosiwe.